News Collection: रेखाको नाम लिएपछि आर्यनले के गरे ?
रेखाको नाम लिएपछि आर्यनले के गरे ?
नायिका रेखा थापा र नायक आर्यन सिग्देलबीचको शितयुद्ध सबैसामु छर्लङ्गै छ । नायिका थापा आर्यनको नाम लिन चाहँदिनन् भने आर्यनको पनि कथा उस्तै छ । चलचित्र ‘कसले चोर्यो मेरो मन’को छायांकन समाप्ति सँगसँगै बढेको यि दुईको शितयुद्ध अहिले पानी बाराबारको अवस्थामा छ । यसैले पनि कुनै सार्वजनिक कार्यक्रममा एक अर्का प्रति व्यंग्य प्रहार गर्नु यि दुईको रोग जस्तै बनेको छ ।
बिहीबार राजधानीमा भएको एक कार्यक्रममा पनि यस्तै कथा दोहोरियो । कार्यक्रममा हाफ टिसर्ट लगाएर पुगेका आर्यन बेलुकी हुँदै गएपछि चिसोले पीडित बनेका थिए । कार्यक्रममा रेखाको बारेमा कुरा चल्नु स्वभाविकै थियो । रेखाले बोलेको शताब्दी शब्द अहिले निक्कै चर्चित छ । आर्यन पनि यस्तै भिडमा हराए । एकछिन उनले पनि अन्य व्यक्तिको मुखबाट रेखाको बारेमा गरिएका कुरा सुने र आफुले पनि केही बोले । रेखाको चर्चा केही पत्रकार र आर्यनको बीचमा मसला बनिरहेको थियो ।
एकछिन उनको चर्चा भएपछि आर्यनले भने -’अरे कस्तो मान्छेको नाम लिइएछ, खै पानी कहाँ छ, मुख खोकल्नु पर्यो’ उनी पानी कहाँ छ भन्दै खोज्न थाले । आर्यनले पानी खोज्दै हिँडेपछि उपस्थित पत्रकाहरुमाझ केही समय हाँसो छुट्यो । आर्यनको रेखाप्रतिको यो व्यवहारले यि दुई बीचको शितयुद्ध कहाँसम्म पुगेको रहेछ भन्ने थाहा हुन्छ । आर्यनले आखिर किन रेखाको नाम समेत आफ्नो मुखबाट उच्चारण गर्न चाहेनन् त ? उच्चारण गरिसकेको नाम पनि उनले किन पानीले मुख खोकलेर सफा गर्न खोजे ?
जेहोस् आर्यन र रेखा बीचको यो लफडा भने हेर्न लायक नै छ । तर रेखाको सम्बन्ध आर्यनसँग मात्र होइन, उनले अभिनय गरेका अधिकांश नायकसँग छैन । आखिर रेखा नै हुन्, मन नपरेको मान्छेसँग त कहाँ सम्वन्ध गाँस्छिन् र ? आखिर रेखाको भाषामा नै भन्ने हो भने त, यि बच्चा भाइहरुले के नै गर्न सक्छन् र ? हैन त रेखा जी ?